Somaliland: Rooda Axmed Yaasiin Oo Falkii Gurigeeda Lagu Soo Weeraray Ku Eedaysay Xukuumadda Iyo Xisbul Muxaafidkeeda KULMIYE - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Rooda Axmed Yaasiin Oo Falkii Gurigeeda Lagu Soo Weeraray Ku Eedaysay...
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ee Gobolka Saaxil Marwo Rooda Axmed Yaasiin ayaa falkii gurigeeda lagu soo weeraray eeddiisa waxa ay dusha ka saartay xukuumadda iyo xisbigeeda KULMIYE iyada oo sheegtay in dhaawacyo loo gaystay gabadh ay dhashay iyadu kadib markii sida ay sheegtay iyada la waayay oo qorshuhu ahaa in iyada wax la yeelo balse ay iyadu Rooda ahaan wakhtigaasi gurigeeda ka maqnayd. Guddoomiyaha Xisbiga UCID ee Gobolka Saaxil Marwo Rooda Axmed Yaasiin waxa ay si aan gabbasho lahayn falkaasi waxashnimada ah ugu eedaysay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo xisbigeeda KULMIYE in ay ka dambeeyeen maadaama bay tidhi ay siyaasadda cadaawe u haystaan oo ay kaga aarsanayaan xaqiiqooyinka ay sheegto sida ay hadalka u dhigtay.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ee Gobolka Saaxil Marwo Rooda Axmed Yaasiin oo shalay saxaafadda la hadlaysay waxa ay tidhi: “Waxa ay ahayd abbaaro sagaalkii cawaysnimo meelahaasi. Waxa aan ka maqnaa guriga waxaana wakhtigaasi yimid guriga lix nin oo shan ka mid ahi wajiba soo qarsadeen oo ay xidhan yihiin waji-xidh (Masker) indhaha oo kali ahi ay muuqdaan. Inta badan waxa ay ahaayeen dhallinyaro waxaana la socday nin isagu aan da’ ahaan ku qiyaasayno kontomeeyaha oo isagu cimaamad isku duubay. Inan aan dhalay ayay soo weerareen waxaanay ku garaaceen feedh iyaga oo qoorta qabtay kadib waxa ay mindi kaga mudeen naaska korkiisa. Waxa ay inantu noo sheegtay in shanta wiil gacanta saareen odayguna dusha kala socday kadibna waxa ay ka daadiyeen ilkaha iyaga oo jabiyey lafta daanka. Kadib waxa ay inantii oo liidata ugu tuureen dhulka. Hadalkii ugu dambeeyey ee ay sii maqlaysay waxa uu ahaa ‘waar tanba ka dhammee iyo iyadii maaha’. Ninka weyn ayaa sidaasi lahaa oo lahaa ka dhammee waxaana muuqatay in ay aniga oo Rooda ah I doonayeen balse ay markii ay I waayeen ay inanta ku bilaabeen” ayay tidhi Guddoomiyaha Xisbiga UCID ee Gobolka Saaxil Marwo Rooda Axmed Yaasiin, waxaanay intaasi hadalkeeda ku dartay: “Anigu xaqiiqada Somaliland ka jirta kama aamusayo kamana habranayo. Waxa aan waligayba u taaganahay in aan ka hadlo. In badan ayay iga soo gaadhay arrinkaasi dhibaato oo la isku dayay in la igu dilo. Uga baqan maayo maanta gurigayga khalkhalka la galiyey. Midida la is yidhi Rooda galiya wax aan ku sii kordhiyo mooyee wax aan kaga dhimayaa ma jirto. Waxa gurigayga soo weeraray waa xukuumadda iyo xisbigeeda KULMIYE oo is xambaarsan. Waa kuwo kala qaybsan haddana dilka iyo dhaca u midaysan. Xisbiyada mucaaridka ah waa kuwo u heshiis ah. Dad maanta wajiga soo duubtay adduunka uunbaynu ku naqaanay iyo filimada ee waa dhacdo cusub. Taleefanadayda waxa ku jira farriimo hanjabaad ah. TELESOM Berbera waan dhagaysiiyey waxbana kamay qaban. Saldhigga Berbera waan ogaysiiyey waxba lagama qaban. cid kale oo bacbac laysaa ma jirto. KULMIYE siyaasadda ayay cadaawad ka dhigeen iyo dawladda Siilaanyo. Waa dhaqamadoodii awalba iyaga ayaa is dilayay oo bambooyin isku tuurayay dee markaa anigaan nasteex ii gali maayaan” ayay tidhi Marwo Rooda Axmed Yaasiin. Oo ah Guddoomiyaha xisbiga UCID ee G. Saaxil
Rooda Axmed Yasiin